Root (R) -Oxiracetam Powder (68252-28-8) Soosaarayaal - Phcoker
Root (R) -Oxiracetam budada (magaca koritaanka magaca ISF 2522) waa daroogada nootropic ee qoyska cunsuriyada waana mid aad u fudud …….
Capacity: 1420kg / bishii
Root (R) -Maxxametam budada (68252-28-8) video
Kalluunka (R) -Kulalka -Oxiracetam waa (R) -enantiomer of oxiracetam deriska ah ee nootropic. Oxiracetam (ISF 2522) waa daroogo ah noocan ah ee qoyska cunsuriyada iyo kicinta. Qiyaasta IC50: Bartilmaameed: daawada nootropic Oxiracetam (ISF 2522) waa daroogada aan loo baahnayn ee qoyska cunsuriga ah iyo kicinta.  Daraasado dhowr ah oo xayawaan ah ayaa soo jeedinaya in walaxda ammaankeedu yahay xitaa marka qaadashada qadar badan la isticmaalo muddo dheer Hase yeeshee, farsamooyinka ficilka ah ee qoyska qamriga cunsuriyada ayaa weli ah arrin cilmi baaris ah. Oxiracetam looma oggolaanin Maamulka Cuntada iyo Maandooriyeyaasha isticmaalka dawooyinka ee Maraykanka.
Root (R) -Photo-oxiretamam (68252-28-8) Smamnuucista
Product Name Root (R) - budada ohiracetam
Magaca Kiimikada Raw (R)-Oxiracetam powder;68252-28-8; (R)-2-(4-HYDROXY-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL)ACETAMIDE;
brand Name Wax macluumaad ah oo la heli karo
Fasalka Daroogada Wax macluumaad ah oo la heli karo
Molecular Wsideed 158.16
barafku Psaliid Wax macluumaad ah oo la heli karo
Boiling Point 494.6 ° C at 760 mmHg
Biological Life-Life Wax macluumaad ah oo la heli karo
SOlubility Dajinta DMSO
Storage Temperature Qalalan, madow iyo 0 - 4 C muddo gaaban (maalmo illaa toddobaadyo) ama -20 C muddo dheer (bilo illaa sannado).
Application Hooyo (O846905) enantiomer oo leh awood waxtar leh oo aan la saadaalin karin marka loo eego (-) - enaniyomer.
qaydhiin (R) -Oxiracetam budada (68252-28-8) Tafaasiisha
Kalluunka (R) -Kulalka -Oxiracetam waa (R) -enantiomer of oxiracetam deriska ah ee nootropic. Oxiracetam (ISF 2522) waa daroogo ah noocan ah ee qoyska cunsuriyada iyo kicinta. Qiyaasta IC50: Bartilmaameed: daawada nootropic Oxiracetam (ISF 2522) waa daroogada aan loo baahnayn ee qoyska cunsuriga ah iyo kicinta.  Daraasado dhowr ah oo xayawaan ah ayaa soo jeedinaya in walaxda ammaankeedu yahay xitaa marka qaadashada qadar badan la isticmaalo muddo dheer Hase yeeshee, farsamooyinka ficilka ah ee qoyska qamriga cunsuriyada ayaa weli ah arrin cilmi baaris ah. Oxiracetam looma oggolaanin Maamulka Cuntada iyo Maandooriyeyaasha isticmaalka dawooyinka ee Maraykanka
(R) -Oxiracetam budada (68252-28-8) Mashruuca Waxqabadka
(R) -oxiracetam, waxay ahayd qayb ka mid ah waxtarka waxtarka leh ee yaraynta dhibaatooyinka barashada miyir la'aanta iyo xasuusta iyada oo hagaajinaysa dhaawaca neuronka iyo dhibaatooyin cadcad, kordhinta socodka dhiigga ee maskaxda, iyo joojinta dhaqdhaqaaqa astrocyte ee jiirka qalliinka ah ee maskaxda ah.
Faa'iidooyinka of (R) -Oxiracetam budada (68252-28-8)
Xoojin iyo Focus
Xoojinta Afka Wanaagsan
Heer-xasaasi ah iyo Horumarin Hirgalinta
talinayo (R) -Oxiracetam budada (68252-28-8) Qiyaasta
Qiyaasta daawada oxiracetam waa ka yar tahay burcad-badamaha, laakiin taasi macnaheedu maaha qadar yar oo ku filan. Qiyaasta caadiga ah waxay u dhexeysaa inta udhaxeysa 1200 mg iyo 2400 mg laga qaaday koorsada maalin, labadaba seddex ilaa seddex ayaa si siman u faafiya mudada qaadashada (sida saddexda qiyaas ee 400mg ama 800mg).
Dhibaatooyinka ay keento of (R) -Oxiracetam budada (68252-28-8)
Oxiracetam waxay sababi kartaa madax xanuun. Si aad uga takhalustid madax xanuunka oxiracetam, kaliya qaado qadarka dabiiciga ah sida alpha GPC ama citicoline.
Sababtoo ah waxay leedahay qaabab fudud oo kiciya, oxiracetam waxay u horseedi kartaa wareegyada hurdada caadiga ah haddii la qaato goor dambe maalinta.
Dhibaatooyinka kale ee hurudda iyo neerfaha, marar dhif ah, ayaa marmar la soo sheegay. Saameynahan waxaa guud ahaan laga ilaalin karaa qaadashada oxiracetam horaantii maalintii ama yaraynta qiyaasta.